नेपाल आज | नेपालका नेताहरुका वारेमा सुरेन्द्र केसीको विश्लेषणः पहिलो पुस्ता अकर्मन्य भयो, दोस्रो पिँढीमा जानुपर्छ [भिडियोसहित]
नेपालमा नेतृत्व जस्तोसुकै भएपनि अन्ध भक्त वा अन्धो विरोध गर्ने प्रचलनले राजनीतिमा जरो गाडेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रुपमा विभाजन भएपछि यो समस्या अझै वढेको छ। आफनो गुटका नेतालाई भगवान वनाउने र अर्को गुटका नेतालाई खुल्याउने परिपाटीले कार्यकर्ता मात्र होईन, नेताहरुलाई पनि गाँजेको छ ।
पछिल्लो समय आयोजना हुने सार्वजनिक समारोहहरुमा शिर्ष नेताहरुले प्रयोग गर्ने भाषा र शैलीलाई हेर्ने/सुन्ने हो भने पनि धेरै कुरा प्रष्ट हुन्छ। तर, पनि उनीहरु आफुलाई सवैभन्दा इमान्दर र देशभक्त भनेर देखाउन मरिहत्ते गर्छन्।
नेपालका नेताहरुको ब्यक्तित्व कस्तो छ त भन्ने विषयमा हामीले इतिहाँसविद तथा राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र केसीसँग कुरा गरेका छौं । उनी अहिलेको नेतृत्व असफल भएको वताउँछन। पहिलो पुस्ताले जिम्मेवारीवाट पन्सेर दोश्रो पुस्तालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘सवैलाई थाहा छ, नेताहरु आडम्वरी र ढोगी छन। राजनीतिलाई ब्यवासाय वनाए । उनीहरु त्याँहावाट चटपटाउँदैनन्’ उनी भन्छन्–‘तर, यदि मेरो कुरा सुन्छन भने पहिलो पुस्ताले विश्राम लिनु पर्छ र अर्को पिढिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । उनीहरुले के कवुल गर्नुपर्छ भने उनीहरुकै कारण आज नेपालको राजनीति यहाँ आईपुग्यो। यत्रो दुई तिहाई पनि विचलित भयो ।’
उनीहरु मन्त्री/प्रधानमन्त्री वन्नका लागि अहिलेको अवस्था आएको केसीको भनाई छ । ‘उनीहरु मन्त्री÷प्रधानमन्त्री वन्नका लागि त होनी’ उनी भन्छन्–‘उनका छोरी/वुहारीका लागि लागि त हो नी। देश र जनताका लागि हो र ? एक ठाउँमा पनि देश र जनता भन्या छन् ।’
केहि दिन अघि नेकपाको सचिवालयमा पेश भएको १८ र ३८ पृष्ठको आरोप प्रत्यारोपमा पनि खाली पद र पावरको कुरा मात्र छ। त्यसमा एक ठाउँमा पनि देश, जनता र क्रान्तिको कुरा उल्लेख नभएको उनले वताए । विश्लेषक डा. केसीको नजरमा नेताहरुको ब्यक्तित्वः
ओली अराजक, ब्यक्तिवादी, अहंकारी, आडम्वरी, असंवेदनशिल र प्रतिसोधी छन् । नयाँ–नयाँ फण्डा निकाल्न जान्दछन् । नाकावन्दी, लिम्पियाधुरा, ग्याँस पाईप, रेललगायतका फण्डा अपनाए। राष्ट्रसंघले भारतीय नाकावन्दीलाई नाकावन्दी होईन भन्दा, कांग्रेसले नाकावन्दी हो भन्न पनि नसक्दा र काठमाण्डौका केहि वौद्धिक÷ लालवुझक्कडहरुले नाकावन्दीलाई मधेश विद्रोह भनीरहँदा ओलीले नाकावन्दी हो भनेर यसका विरुद्ध लड्छु भने। यसता विषयमा केपी ओली अगाडि छन् । तर, यो फण्डा हो भन्ने देखियो।
पुस्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)
प्रचण्ड अलिक पोलिटिकल छन्। आफनो फटाईँलाई पनि उनी कलात्मक रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्छन् । मान्छेलाइ यस्तो भ्रम दिन सक्छन–मानौ वास्तवामा जनयुद्ध नै हो, कम्युनिजम नै हो, पोल्टिकल नै हो। यो स्किल प्रचण्डमा छ। त्यसैले मैले उनलाई डाइनामिक लिडर हुन भनिदिएको छु। कतिपय लालवुझक्कडले आतकंककारीलाई डाईनामिक भन्दियो भन्छन् । तर, त्यो डाईनामिजनलाई उनले छोरी वुहारी र पद प्रतिष्ठा कमाउनमा दुरुपयोग गरे । उनको कमजोरी भनेको सम्पुर्ण क्रान्तिका प्राप्ति र सौर्यहरुलाई पद र प्रतिष्ठामा दुरुपयोग गरे। विलासी मनोवृत्ति अत्याधिक छ। रिसोर्ट÷स्टार होटल कल्चर छ। महंगो जिवन शैली छ। मलाई लाग्छ उनको जत्तिको कस्टली पहिरन÷पोशाक, गाडी, सेक्युरिटी अरु कसैको छैन होला।
नेपाल अलि सरल छन् । उनको सादा जिवनशैली छ। उनी कार्यकर्तामा सहज रुपमा उपलब्ध हुन्छन्। कार्यकर्तालाई भावनात्मक रुपमा हेर्छन। यो प्रवृत्ति माधव नेपालमा अरुको तुलनामा वढि छ। तर, नातावादमा उनी पनि चुकेको देखिन्छ। श्रमितीककै नाममा पनि आलोचना भएको थियो ।
झलनाथ खनालको स्टे«न्थ र विकनेश केहि छैन । उनी सामान्य एक जना लिडर हुन । तत्कालिन नेकपा मालेको द्वन्द्वले गर्दा प्रसंगवस एक पटक महासचिव भए। तेहि वापत मदन भण्डारीले एक पटक मन्त्री वनाईदिए । पैसा कमाए, मस्ति मारेका छन् ।
वामदेव नेकपाको मुङ्गो हुन । अहिलेको ववण्डरको जनक उनै हुन । उनकै लागि आजको दिन आयो नेकपा भित्र। उनलाई तुरुन्त मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनु पर्ने भो। स्थान खाली गरेर भएपनि उपनिर्वाचन गराउनु पर्छ भन्ने कुरा आयो। उनी एउटा सानो गुट त्यँहा राखिरन्छन। कसैलाई सांसद, कसैलाई मन्त्री वनाई दिन्छन। ३ जनाको गुट लिएर हिडिरन्छन, त्यसलाई च्यापीरन्छन र त्यसलाई नै मुङ्गोको रुपमा कसैले प्रयोग गरिदिन्छन् । सानो समुह वनाउने त्यहि नै उनको स्ट्रेन्थ हो । पटक–पटक प्रधानमन्त्री हुने र लिडरसिपमा आउने चाहाना राख्छन्। उपनिर्वाचनमा गएर भएपनि निर्वाचित हुनै पर्छ भन्ने वाल हठ देखाउँछन्। हारेर पनि राष्ट्रिय सभामा छिर्नु । श्रीमतीलाई वोक्नुलगायत उनमा धेरै कमजोरी छन् । राजनीतिज्ञमा यतिविघ्न कमजोरी राम्रो होईन ।
नारायणकाजी पनि झलनाथ जस्तै हुन। उनको राजनीतिक पृष्ठभुमि त्यति लामो छैन । ४० को दशकमा मोहन विक्रमवाट छुटेर निर्मल लामातर्फ लागे। त्यहाँ केहि युवा नेताहरु थिए, जसमा द्वन्द्व थियो । जस्तैः श्याम श्रेष्ठ भर्सेस नारायणकाजी श्रेष्ठ। त्यो वेलामा निर्मल लामाले के कारणले हो नारायणकाजीलालाई वोके। श्यामपछि परेर नारायणकाजी माथि आए । ०५१ सालमा प्रचण्ड पक्षले जनयुद्धको कुरा निकाले। निर्मल लामाहरु त्यहावाट पन्सेर शहर आए । शहरमा चर्को दमन थियो । दमनवाट वच्न नारायणकाजीले मोहन विक्रमसँग सहकार्य गरे। वाहिर चै उनी मोहन विक्रमसँग थिए, तर भित्र चै माओवादीलाई वोकेर हिड्थे। त्यसैलाई मुल्यांकन गरेर प्रचण्डले आजको ठाउँमा नारायणकाजीलाई वढाई दिई र नारायणकाजीले पनि प्रचण्डसँग पार्टी एकता गरे ।
नेपाली नेताहरुमा सवैभन्दा अकर्मन्य नेता शेरवहाुदर हुन्। निस्कृय, अकर्मन्य, चिन्तन–मनन र लेखन–पढन केहि नगर्ने । उनी नेविसंघको संस्थापक अध्यक्षको रुपमा इतिहाँस वनाउँदै आए । पछिल्लो कालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग जोडिए। तत्कालिन अमेरीकी राजदुतको प्रयासमा आरजुसँग उनको वैवाहिक सम्वन्ध जोडियो। आरजुको अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध राम्रो भएकाले देउवालाई फाईदै भयो । पछिल्लो कालमा पार्टीभित्र गिरिजाप्रसाद कोईराला र कृष्णप्रसादको चर्को संघर्ष चल्यो । अनि पछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको विरासत चै विभिन्न कारणले देउवालाई प्राप्त भयो । त्यहि अपुताली चै देउवाले भोग गर्न पाएका हुन।
देउवालाई नेपाली समाज खास गरी कांग्रेसीजनको दुस्चरित्रको वारेमा राम्रो जानकारी छ । जो पद, पैसा र प्रतिष्ठामा नै राजनीतिलाई समर्पित गरिदिन्छ। त्यो वारेमा उनी जानकार छन् । नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताको त्यहि लाचारीलाई दुरुपयोग गरेर शेरवहादुर ‘शेरवाहदुर’ भएका हुन । वास्तवमा उनी शेरवहादुर होईनन्, नाम मात्र शेरवहादुर हो । उनी तिनै कांग्रेसी अकर्मन्य र निस्कृय कार्यकर्ताको लिडर हुन । कांग्रेसी नेता÷कार्यकर्ता स्वार्थी छन्, पाखण्डी छन्, ढोगीं छन्। उनीहरुलाई पद, प्रतिष्ठा र पैसा चाहिएको छ। विचार सिद्धान्त देश चाहिएको छैन । कांग्रेसलाई हराउने त शेरवाहादुर नै हुन नी त। शेरवहाुदरलाई नैतिक दृष्टिकोणले यो नेतृत्वमा वसिरहने अधिकार छैन । भारतमा रहुल गान्धिले राजिनमा दिए। यहिँ पनि माधव नेपालले राजिनामा दिए। गिरिजाप्रसाद कोईरालाले मध्यावधि हराएपछि संसदिय दलवाट रानीनामा दिए। देउवामा यो केहि देखदैन।